Ukuphefumlelwa Kombala | May 2022
Imibala eli-15 ehamba noPhephu -Umdibaniso oBalaseleyo woMdibaniso
Fumanisa ukuba yeyiphi imibala ehamba kakuhle ngombala omfusa ukuze uphefumlele ngaphakathi kwakho ngale mizekelo mihle yoyilo kunye neengcebiso.
Imibala eli-14 ehamba neBlue Buhle-Imibala yePaley eluhlaza
Fumanisa imibala elishumi elinesine ehambelana nombala oluhlaza okwesibhakabhaka, ukusuka kokungathathi hlangothi okufudumeleyo ukuya kwiindawo ezingalindelekanga, ezinobungqingili. Nantsi indlela yokwenza umbala obalaseleyo womnyama.
Kukho amawaka eengwevu (kwaye ewe, 'ngwevu,' hayi 'ngwevu' -ukuba useMelika, oko kukuthi) kwivenkile yepeyinti, kodwa ezi zingama-42 zizithunzi ezinconyelwe ngabaqulunqi bangaphakathi abanetalente kwisizwe. Nguwuphi oya kukhetha ikhaya lakho?
Imibala e-16 yokuThoba-iMibala yokuPholisa kunye nokuPhumla yeGumbi ngalinye
Imibala etyebileyo kunye nee-pastels ezithambileyo zibolekisa imvakalelo yokuthomalalisa kwezi ndawo. Ipeyinti kwigumbi lakho yenye yezi zinto ziphumlayo, nezolisayo.
11 Eyona mibala mihle yePeyinti eluhlaza - iMithunzi yepeyinti eluhlaza
Uhlaza kuyathomalalisa, kunyusa, kwaye kwenza yonke into ejikelezileyo ijongeke intle. Akumangalisi ukuba umbala owuthandayo wendalo-kwaye uthandwa kakhulu ngabaqulunqi.
AbaYili baBelana ngee-15 zeNdlela eziBalaseleyo zeHoloji- IiNdlela zeNdlela eziHleliweyo kunye neeMbono zePeyinti
Fumana ukhuthazo lweeholo ezilishumi elinesihlanu ezihonjiswe kakuhle kunye neengcebiso zoyilo kunye neengcebiso ngombala weendlela zokuphucula yonke indawo yakho.
I-14 yeeMithunzi eziLungileyo zeOrange- Imibala ePeyinti ePhambili yeOrenji
Abaqulunqi abaphambili babelana ngee-shades zabo abazithandayo zepeyinti yeorenji.
Ungayihombisa njani nge-Mint Green- Imibala engama-25 ukuya kwi-Paint ne-Mint Decor
Yenza indawo epholileyo, epholileyo yokuhlala kunye nokuhonjiswa okuluhlaza okomhlaza, i-mint green accents yasekhaya, kunye neminti yokuhombisa ngemibala eluhlaza ngokuthe ngqo.
18 Imibala yepeyinti yokuGqibelela egqibeleleyo - Iinkqubo zemibala yala maGumbi okuTya
Amagumbi okutyela ayi-18 anemibala kunye ne-chic
Imibala eli-10 yeSage Green Paint ezisa uxolo kunye nokuzola- eyona mibala mihle yepeyinti eluhlaza
Umbala ongathathi hlangothi unyuka ngokwePinterest. Faka uhlaza oluthambileyo ekhayeni lakho ngale mibala yepeyinti uyithandayo isetyenziswa ngabaqulunqi abaziingcali.
Iingcamango zeGumbi lokuPhila eliMhlophe ezingama-26 -Ukuhonjiswa kwamaGumbi okuPhila aMhlophe ngoku
Jonga la magumbi angama-26 asebenzayo kunye namnandi amhlophe okuhombisa izimvo ezivela kubaqulunqi abaphambili.
Umbala we-10 oPhezulu oMhlophe oMhlophe oMhlophe kuwo onke amagumbi endlu
Ngaba ujonge into efudumeleyo kancinci kunombala wepeyinti omhlophe omhlophe? Khuthazwa ngamagumbi ayili ayili anemibala yepeyinti emhlophe.
Ipeyinti yombala wepeyinti-uMbala weKhaya oHombisa iimpazamo
Ukukhetha umbala ayisosigqibo sokuthatha kancinci, njengoko kuseta imeko yegumbi kunye nefuthe kwindlela ifanitshala yakho ebukeka ngayo.
Imibala emi-10 yoMgangatho oPhezulu woMgangatho wokuzama ukuzama- Imibono yoMgangatho oPeyintiweyo kunye neMibala
Ukupeyinta umgangatho yenye yezona zinto zikhawulezayo ezinamandla. Kuthiwani ngokubomvu kwetamatato, ulwandle oluhlaza okwesibhakabhaka? Abanye babaqulunqi abathandayo beNdlu bacinga ukuba umbala usebenza ngokumangalisayo.
Iingcamango ezili-14 eziBomvu zeKhitshi-Ukuhombisa iKhitshi eliBomvu
Igalari yethu yeefoto ezibomvu zekhitshi, ukusuka kwi-retro ukuya kwi-rustic.
Iingcamango ezi-12 zeFenitshala eziPeyintiweyo- Uyipeyinta njani ifanitshala
Abaqulunqi banika iingcebiso kunye namacebo okuhlaziya ifenitshala yakho yakudala ukuze ibonakale intsha. Into efunekayo yingubo yepeyinti!
UBenjamin Moore 2020 Umbala woNyaka utyhila-UkuKhanya kokuQala kokuKhanya
Cinga igumbi lakho lokulala elihlazileyo liqinisekisiwe: UkuKhanya kokuQala, umbala we-2020 woNyaka ovela ku-Benjamin Moore, yinto epholileyo, engathathi hlangothi kwi-Millennial Pink.
Imibala emi-8 yebala elimdaka ngebala
Yintoni ngombala omdaka? Yonke into eyiliweyo siyazi ukuba iyathandwa yiyo! Ngaba kungenxa yobunzulu bayo kunye nobutyebi? Ukuphakama kwayo? Ukuba ingumhlaba, inomdla njengetshokholethi enyibilikiweyo? Zonke ezi zinto zingasentla- kwaye ezinye.
13 Imibala eyahlukeneyo yoBomvu- Eyona mibala mibala miBomvu
Olubomvu unokukhetha ngokungagungqiyo, kodwa akufuneki woyike. Indlu entle ineengcebiso ngendlela yokusebenzisa imibala eyahlukileyo ebomvu, nokuba upeyinta igumbi lonke okanye itrim encinci.
Imibala e-12 yeChalk yepeyinti elungileyo -Imibono yePeyinti entle yePeyinti
Funda ngeChalk Paint ngu-Annie Sloan, emva koko ufumane imibala yethu ye-Chalk Paint eyintandokazi kunye nendlela ekufuneka uyisebenzise ngayo ukuze ufumane ukuthandana, ukuhlala ngaphakathi.
izityalo zexhama azizukutya
ipenthouse entsha york
Ukuhonjiswa kwasekhaya okuluhlaza okwesibhakabhaka nokumhlophe